Ny safidy tsara indrindra amin'ny tantara tantara
Fanamarihana tantara tantara
Ray aman-dreny misaraka, nataon'i Marina Jarre
Nisy fotoana nanjary tontolo tsy nahazo aina tany Eoropa nahaterahan'i Eoropa, izay nahatonga ny zaza ho tonga amin'izao tontolo izao tao anatin'ny tsy fahitana, fongotana, fanilihana ary koa ny fahatahoran'ny ray aman-dreniny. Androany dia nifindra tany amin'ny faritra hafa amin'ny planeta ity raharaha ity. Ny fanontaniana dia ny maka izany fomba fijery izany ...
Ny lalàn'ny amboadia, nataon'i Stefano de Bellis
Hiankina amin'i Luperca, ilay amboadia tsara fanahy nono an'i Romulus sy Remus. Ny tiana holazaina dia ny angano tsy azo ovaina ary mifanaraka tanteraka amin'ny ampahany amin'ny vinan'ny Empira Romana ho kolontsaina tsy azo idirana nefa voalamina, miaraka amina voajanahary ho velona ary haharitra mihitsy aza. Satria tsy nisy sivilizasiona hafa ...
Ireo boky 3 tsara indrindra nataon'i Luis Zueco
Nihaona tamin'i Luis Zueco aho teo amin'ny torrid sy Zaragoza 23 aprily taona vitsivitsy lasa izay. Ireo mpamaky saro-kenatra dia nolalovan'i Paseo Independencia tamin'ireo boky marobe naseho tamin'io Andron'ny Saint George mamirapiratra io. Ny sasany nangataka ny sonian'ny henjana fa ny sasany kosa nanara-maso avy any an-kafa raha ...
Andro iray dia ho tonga any Sagres aho, avy amin'i Nélida Piñón
Toy ny mahazatra, literatiora hanavotana ny Tantara. Tsy misy na inona na inona amin'ny fianarana ny lasa raha tsy misy ny fizahana literatiora ilaina. Satria ny tantara foronina ara-tantara dia mihoatra ny tantara mitantara ny fisehoan-javatra sy ny daty natokana ho an'ireo mpino mpivavaka be. Manolotra antsika i Nélida Piñón ...
Violet, ny Isabel Allende
Eo am-pelatanan'ny mpanoratra toa Isabel Allende, ny tantara dia mahavita ity asa fanatonana ny lasa feno fampianarana ity. Na mitombina na tsia ireo fampianarana ireo, satria amin'ny famerimberenana ny fahadisoana dia mahomby isika. Saingy hey ... Misy zavatra mitovy amin'izany mitranga amin'ny mpitantara tantara foronina. Satria maro ny mpamaky ...
Madonna manao akanjo volom-borona avy amin'i Sabahattin Ali
Torkia no fahitana tsara ny andiam-pasty tato ho ato. Melodrama Amerikanina Tatsimo dia nanome làlana ny tantara isan'andro any Torkia eropeana indrindra. Tsy hoe mandeha ity novela ity, fa misy zavatra manentana ny fanahy amin'ny teti-dratsy. Fotoana hafa hafa fa olana mitovy amin'izany ...
Ny fifohazan'ny heresa, nataon'i Robert Harris
Misy foana ny fotoana isian'ny mpitantara ny angano ara-tantara rehetra miatrika ny fientanentanana misy ankehitriny miaraka amin'ny ahiahy fanampiny noho ny toerana maizin'ny fotoana lavitra. Robert Harris dia tsy ho diso anjara amin'izany. Ao amin'ny fiarahamonina iray izay nanilika ny finoana sy ny dogma ny ...
pejy1 pejy2 ... pejy19 manaraka →